TOP NEWS: Maxaa ka jira in axmad madoobe deg deg kismaayo u tagay kadib markii ay soo cusboonaatay xiisad u dhaxeysa beelaha….. | Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Maxaa ka jira in axmad madoobe deg deg kismaayo u tagay kadib markii ay soo cusboonaatay xiisad u dhaxeysa beelaha…..
Monday May 22, 2017 - 12:28 under Somali News by Tifaftiraha K24
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegaayaan in Halkaas uu maanta si deg deg ah ugu laabtay Madaxweynaha Maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
Dib ugu laabashada deg dega ah ee Axmed Madoobe uu ku tagay Magaalada Kismaayo ayaa timid kadib markii ay bilowdeen kulamo looga soo horjeedo qorshe ay wado Madaxtooyadiisa oo ku wajahan Xildhibaano kamid ah baarlamaanka Maamulkaas.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa u yeeray Taliyaasha ciidamada gaar ahaana Saraakiisha Nabadsugida & Sirdoonka Maamulkaas kuwaas oo ay ka wada hadlayaan sidii arrimaha jira xal looga gaari lahaa.
Axmed Madoobe ayaa la sheegay in uu ka soo horjeedo baaq ay soo saareen dhawaan Odayaasha & Isimadda beesha Hartiga oo ay uga soo horjeedaan in baarlamaanka laga saaro xubno kamid ah beeshaas.
Jubbaland ayaa ku dhisan nidaamka Qabaa’ilka waxaana cabsi laga qabaa in ay arrintan keento arrimo hor leh oo ka qarxa magaalada Kismaayo oo daganeyd sannadyadii lasoo dhaafay tan iyo markii laga qabsaday Al- Shabaab.
Kal hore Madaxtooyada Jubbaland waxay masaafurisey Odayaal iyo Siyaasiin ka soo jeeda beelaha Hartiga oo hadda ka maqan magaaladaas, kuwaas oo Xaasaskooda loo diiday in ay u yimaadaan taasna ay ka dambeeyeen xubno kamid ah Jubbaland.
Warar ayaa sheegaya in Madaxtooyada Jubbaland ayaa Hanjabaad u dirtay qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka ee beelaha Hartiga oo ay ugu hanjabtay in ay ka baxaan arrimaha ay ku jiraan laakiin taasi ayaa xiisad hor leh sii abuurtay.